IZiko loKomeleza uKhenketho kwiHlabathi liphela lizibophelele ekubuyiseleni uKhenketho eHaiti
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseHaiti » IZiko loKomeleza uKhenketho kwiHlabathi liphela lizibophelele ekubuyiseleni uKhenketho eHaiti
Iindaba zaseHaiti • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Inkxaso yokubuyisela ukhenketho eHaiti
Kwintlanganiso yokuqala ebibanjelwe namhlanje, amalungu eQela loKomeleza aMandla oKhuseleko, ukuPhucula kunye noQinisekiso bathembise ngenkxaso yabo epheleleyo ukubonelela ngoncedo kwiHaiti ehlaselwe yinyikima. UMphathiswa wezoKhenketho kunye nomsunguli weZiko loKomeleza uKhenketho kunye noLawulo lweeNtlekele (i-GTRCMC), Mnu. U-Edmund Bartlett, uthi eli nyathelo liqinisa ukuzibophelela ukukhawulezisa ukubuyisela kunye nokomelela kwemveliso yezokhenketho eHaiti.
Kwintlanganiso, ezinye zeemfuno ezingxamisekileyo zabantu baseHaiti kwaye okubaluleke ngakumbi kukudala imatriki yokuxhasa ukudibana kunye nokusasazwa kwezi zinto kwaxoxwa ngazo.
Abasebenzi bachaze amanyathelo alandelayo aquka i-GTRCMC eququzelela zonke izinto zeenzame zokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
I-GTRCMC izakusebenzisana nabachaphazelekayo kwezokhenketho kwihlabathi jikelele ukuxhasa iHaiti.
“Ndonwabile ukuba ukudibana kwamava kunye nobungcali beli qela liphezulu lizokwazi ukuqala ukubeka iinkqubo kunye neenkqubo ezifunekayo ukunceda abantu baseHaiti ukuba baqale indlela yabo yokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ukusuka kwintlanganiso yanamhlanje, sikwazile ukuxoxa ngezinye zeemfuno zabantu baseHaiti kwaye okubaluleke nangakumbi kukudala imatriki yokuxhasa ukudityaniswa nokusasazwa kwezi zinto, utshilo uMphathiswa uBartlett.
Abasebenzi bacacise amanyathelo alandelayo aquka iZiko loKomeleza uKhenketho kwiHlabathi liphela kunye neZiko loLawulo lweeNtlekele elilungelelanisa zonke izinto zenzame zokubuyisela kwimeko yesiqhelo; sisebenzisana nabachaphazelekayo kwezokhenketho kwihlabathi jikelele ukuya Inkxaso eHaiti; ukusekwa kweekomitana ukujongana nemiba eyahlukeneyo yokubuyiselwa kukhenketho; ubonelelo lwenkxaso yezobugcisa kunye namalungiselelo.
“Ndonwabile ngokwenene ngenkxaso engathethekiyo enikezelwa ngamalungu ebutho. Siziva sinomoya wobuzalwana neHaiti xa sinikwe ukusondela kwethu. Siyinxalenye yayo yonke iJografi kuba oko kuchaphazelayo kuchaphazela nathi, ”wongeze watsho uMphathiswa uBartlett.
Abasebenzi nabo bavumile ukuba kuya kubakho ulungelelwaniso lonxibelelwano; ukubeka iliso nokuvavanya; ukuhlanganiswa kwezixhobo kunye nolawulo; nokomelela kwezokhenketho.
Ohloniphekileyo uLK Cassandra Francois, Umphathiswa Wezokhenketho eHaiti, ubulele onke amalungu eqela lezemisebenzi wathi, “Ndikuxabisa kakhulu ukuzibophelela ekuncedeni iHaiti nangolu manyano, ilizwe liza kuphila ngokukhawuleza phambi kwale ntlekele.”
Ekuqaqambiseni ukubaluleka kwe Ukubuyiselwa kokhenketho eHaitiUMlawuli oLawulayo we-GTRCMC uthe, “uCovid ubonakalisile ukuba negalelo elikhulu kwezokhenketho kuqoqosho lwelizwe, ngenxa yoko ukubuyela kwezokhenketho eHaiti kuya kubaluleka kwikamva laseHaiti, kwaye kufuneka sithathe amanyathelo ngokukhawuleza.”
Umsebenzi, ocwangciselwe ukudibana kwakhona kwiveki ezayo, wongeze uSekela Mongameli weCaribbean Hotel kunye noMbutho wabakhenkethi (CHTA), uNicola Madden-Grieg kunye nomtyali mali kunye nosomashishini, uMorten Lund.